गलाती १ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१ म पावल, न मानिसहरूको तर्फबाट न त कुनै मानिसद्वारा तर येशू ख्रीष्ट अनि परमेश्वर, हाम्रा बुबाद्वारा प्रेषित* नियुक्त भएको हुँ, जसले ख्रीष्टलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो। २ म अनि मसित हुने सबै भाइहरूको तर्फबाट गलातियाका मण्डलीहरूलाई: ३ परमेश्वर, हाम्रा बुबाबाट र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई असीम अनुग्रह र शान्ति मिलोस्। ४ हाम्रा परमेश्वर अनि बुबाको इच्छाबमोजिम हामीलाई वर्तमान दुष्ट युगबाट उद्धार गर्न सकियोस् भनेर हाम्रा पापहरूको निम्ति ख्रीष्टले आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। ५ हाम्रा परमेश्वर अनि बुबाले सदासर्वदा गौरव पाऊन्‌। आमिन। ६ ख्रीष्टको असीम अनुग्रहद्वारा बोलाउनुहुनेलाई छोडेर तिमीहरूले यति छिट्टै अर्कै किसिमको सुसमाचार ग्रहण गर्न थालेको देख्दा म छक्क पर्छु। ७ तर वास्तवमा अर्को सुसमाचारै छैन, बरु केही मानिसहरूले तिमीहरूलाई दुःख दिनुका साथै ख्रीष्टसित सम्बन्धित सुसमाचारलाई बङ्ग्याउन खोजिरहेका मात्र हुन्‌। ८ तथापि, हामीमध्ये कसैले वा स्वर्गबाट आएको दूतले समेत तिमीहरूलाई हामीले सुनाएको सुसमाचारभन्दा फरक अरू कुनै सुसमाचार सुनाउँछ भने ऊ श्रापित होस्। ९ हामीले माथि भनिसकेका छौं, अनि म फेरि भन्छु, तिमीहरूले स्वीकारेको सुसमाचारभन्दा फरक अरू कुनै सुसमाचार कसैले सुनाउँछ भने ऊ श्रापित होस्। १० अब म कसलाई मनाउने कोसिस गर्दैछु, मानिसहरूलाई कि परमेश्वरलाई? अथवा के म मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अहिले पनि मानिसहरूलाई खुसी पारिरहेको भए त म ख्रीष्टको दास हुने थिइनँ। ११ ए भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई प्रस्टै भन्न चाहन्छु, मैले तिमीहरूलाई सुनाएको सुसमाचार मानिसहरूको सुसमाचार होइन। १२ न त्यो मैले कुनै मानिसबाट पाएको हुँ न त कसैले मलाई सिकाएको हो तर येशू ख्रीष्टले मलाई प्रकट गर्नुभएको हो। १३ पहिला यहूदी धर्म मान्दा म कस्तो व्यवहार गर्थें तिमीहरूले पक्कै पनि सुनेका छौ, कि कसरी मैले परमेश्वरको मण्डलीको गर्नुसम्म खेदो गर्थें अनि तहसनहस पार्थें। १४ अनि आफ्नै जातिका मेरा दौंतरीहरूले भन्दा मैले यहूदी धर्ममा धेरै उन्नति गरें किनकि म आफ्ना पुर्खाहरूले बसालेका परम्पराहरू असाध्यै जोसिलो भएर मान्थें। १५ तर यस संसारमा मेरो जन्म गराउनुहुने अनि ममाथि आफ्नो असीम अनुग्रह देखाउनुहुने परमेश्वरलाई जब यो असल लाग्यो कि १६ म मार्फत आफ्नो छोरालाई प्रकट गरूँ अनि मैले अन्यजातिका मानिसहरूलाई उहाँको छोराको सुसमाचार सुनाऊँ, तब म उत्तिखेरै कसैसित सरसल्लाह लिन गइनँ, १७ न त म आफूभन्दा पहिला प्रेषित भइसकेकाहरूलाई भेट्न यरूशलेम नै उक्लें बरु म अरबी भूमितिर लागें र पछि फेरि दमीशक फर्कें। १८ त्यसको तीन वर्षपछि केफासलाई भेट्न म यरूशलेम उक्लें र तिनीसित पन्ध्र दिन बसें। १९ तर मैले प्रभुको भाइ याकूबबाहेक अरू कोही प्रेषितलाई देखिनँ। २० हेर, परमेश्वरलाई अगाडि राखेर म भन्छु, म जे लेख्दैछु, त्यो झूट होइन। २१ त्यसपछि, म सिरिया अनि सिलिसियाका इलाकाहरूमा गएँ। २२ तर यहूदियाका ख्रीष्टियन मण्डलीहरूले पहिले मलाई देखेका थिएनन्‌, २३ तिनीहरूले यति मात्र सुनेका थिए: “पहिले हाम्रो खेदो गर्ने मानिसले अहिले त्यही धर्मको सुसमाचार प्रचार गर्दैछ, जुन धर्मलाई उसले पहिले तहसनहस पारेको थियो।” २४ त्यसैले मेरो कारणले गर्दा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न थाले।
^ गला १:१ * वा, “पठाइएको जन।” ग्रीकमा “अपोस्टोलोस।”